China Portable Travel Kettle စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ထမင်းစားချိန်
ဗို့အား 100-240 V (Adapter-operated)
ပါဝါ (မက်စ်) 500 W
အရွယ်အစား (H) 80 * 80 * 246mm
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (H) 87 * 87 * 245mm
အသားတင်အလေးချိန် ၀.၈ ကီလိုဂရမ်
1. In-1 function ကို
ပွက်ပွက်ဆူနေသောနှင့် 40-100 နွေးစောင့်ရှောက်ခြင်း℃ အကွာအဝေးကိုထိန်းညှိ, ရွေးချယ်မှုအတွက်7အပူချိန် mode နဲ့ခြားနားချက်ကျေနပ်အောင်။ ရေနွေးအိုးကိုလက်ဖက်ရည်ချက်ပြုတ်ရန်နှင့်အရည်ပူနွေးစေရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အရွယ်အစားသေးပေမယ့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်မြင့်မားသော။ အားလုံးတ ဦး တည်းထိတွေ့နွေးစောင့်ရှောက်ခြင်း, ပြုတ်။
2. Microboil ဒီဇိုင်း
လျင်မြန်စွာ ၆ မိနစ်အတွင်းပြုတ်ပါ။ အပြည့်အဝပွက်ပွက်ဆူနေသောအထိရောက်သည်နှင့် LED မီးများသည်ညွှန်ပြပြီးအလိုအလျောက်ပိတ်သွားလိမ့်မည် (အနည်းငယ်ပြုတ်နေသော်လည်းအမှန်တကယ်အပြည့်အဝပြုတ်နေပြီး၊ ဆူပွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ) ။
ဤရေနွေးအိုးသည် 100V-240V မှကျယ်သောဗို့အားနှင့်တွေ့ဆုံပြီးရေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်တွင်ထိန်းထားနိုင်သည်။ NTC၊ အပူထိန်းကိရိယာနှင့်ဖျူးစက်များတွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောအကာအကွယ်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မိခင်အသစ်များအားအထူးသဖြင့်ကလေးသူငယ်များကိုနှုတ်ယူသည့်အခါတိုင်းတိုင်းသည်အကောင်းဆုံးအထောက်အမဖြစ်သည်။
ခရီးဆောင်ရေနွေးအိုးသည်သိုလှောင်ရန်နှင့်သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ ရေပူစသည့်အချိန်တိုင်းတွင်မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ခရီးသည်အားကူညီသည်။
၎င်းသည်အစားအစာအဆင့် BPA အခမဲ့ဆီလီကွန်၊ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင်ဘက်လက်ကိုင်နှင့်အောက်ခံနှင့်သံမဏိ ၃၀၄ အတွင်းပိုင်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
6. Ergonomic ဒီဇိုင်း
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောရေအိုးတစ်လုံး၊ မြင်းကိုယ်ထည်၊ ကြီးမားသောအချင်းဒီဇိုင်း၊ ၃၆၀ ပါဝင်သည် °လွယ်ကူသောရေလောင်း့pring button ကိုအဖုံး，သီးခြားပါဝါကြိုးသည်စတိုင်ကျ။ အလုပ်လုပ်သည်။ ညအချိန်၌ပင်အပူချိန်၏အချိန်နှင့်တပြေးညီဖော်ပြရန်အတွက် LCD ဒီဂျစ်တယ် display ။ လှပမှုအပြင်တာရှည်ခံမှုနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုတို့ပါ ၀ င်သည်။
နောက်တစ်ခု: Tower Air Multiplier Bladeless ပန်ကာ